University of Computer Studies (Panglong)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၀” တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းပေးရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
1. Technopreneurship 2020 Accelerate Award (10,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months)
2. Technopreneurship 2020 Startup Award (8,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months)
3. Technopreneurship 2020 Idea Award (3,000,000 MMK & Memorable Gifts) –2Awards
4. Technopreneurship 2020 Honorable Mention (800,000 MMK & Memorable Gifts) –6Awards
(၇၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အကြို ကျောင်းတွင်း Product Show ပြိုင်ပွဲအား (၅.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော ကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းသားရေးရာဌာတွင် (၁၇.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်
– Second Year(CS)
– Second Year (CT)
Senior Level (Computer Science)
– Fifth Year (CS)
– Fourth Year(CS)
– Third Year (CS)
Senior Level( Computer Technology)
– Fourth Year(CT)
– Third Year (CT)
2019 Myanmar Collegiate Programming Contest(ICPC 2019) *** Team AlphaCU ***
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားများစာရင်း
၂၆.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ ပထမနှစ်ကျောင်းကျောင်းပြောင်းရွှေ့ ခြင်းအားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်… ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ မှ စ၍ ကျောင်းအပ်လက်ခံပါမည်။ ပထမနှစ် ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကျောင်းအပ်နှံရပါမည်။ ဒုတိယနှစ်မှပဉ္စမနှစ်အထိ (၆.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းအပ်နံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
Essay Competition for World Teacher’s Day at UCSPL
The Annual University Journal on Research and Applications (AUJRA 2019) invites you to submit the paper that meets the general criteria of the original and excellence. The submitted manuscript should be original and should not have been submitted or published previously anywhere. AUJRA publishes theoretical, practical, ICT solutions, innovative research and applications for the following topics of interest.
Qtr 3, Union Road, Loilen Township,
Southen Shan State, Myanmar
Postal Code: 06113
+95 81 3104539, +95 81 3104538